Tag: fandrindrana | Martech Zone
Efa teo daholo izahay… mila famelombelona ny tranonkalanao. Na namerimberina ny orinasanao, nanjary efa antitra sy tranainy ilay tranokala, na tsy manova ny mpitsidika amin'ny fomba ilainao azy fotsiny izany. Ny mpanjifanay dia tonga aty aminay mba hampitombo ny fiovam-po ary matetika izahay dia mila mihemotra ary manavao ny fisian'izy ireo tranonkala hatramin'ny fanoratana hatramin'ny atiny. Ahoana no anaovantsika azy? Ny tranonkala iray dia zaraina ho lakileny 6
Amin'ny maha bilaogera manokana sy matihanina ahy dia manana olana amin'ny famoahana lahatsoratra bilaogy isan'andro aho noho ny asako be loatra sy ny fameperana amin'ny fotoana hafa. Fa raha te hahomby amin'ny maha-bilaogera ianao, na ho azy manokana izany na ho matihanina, dia mila mandinika zavatra telo ianao: ny fahaizan'ny fotoana, ny maha-zava-dehibe. Raha hampiditra ny tsirairay amin'ireo singa ireo dia ilaina ny manana drafitra. Ireto misy torohevitra fohy 3 hanampiana anao bilaogy mahomby kokoa: 1.
Saturday, May 26, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Raha mbola tsy nanararaotra ianao dia jereo ny sarimihetsika Hitch. Roa taona ny sary mihetsika, saingy mbola fanoharana mahafinaritra amin'ny marketing. Ao amin'ny sarimihetsika, Alex Hitchens (Will Smith), dia mampianatra ny bandy tsy misy fotoana hahitana ilay tovovavy nofinofisiny. Ny torohevitra omeny dia ny hiezahana hampihena ny lesoka mamirapiratrao, tandremo ny daty hampiarahanao, ary ataovy ny entimodinao. Ny sehatra tsy hay hadinoina indrindra dia ny fiarahana mampiaraka haingana izay an